Ma loo siman yahay awood qaybsiga dalka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sumadda qaranka Iswiidhen. Sawirle: Malte Lindahl/Sveriges Radio
Ma loo siman yahay awood qaybsiga dalka
Wakhti ayuu qaataa baaritaanka noocan ah
La daabacay fredag 31 oktober 2014 kl 12.00
Yey awoodda dalku gacanta ugu jirtaa. Dabaqadauhu ma kala awood badan yihiin? Awood intee le'eg ayay bulshadu ku leedahay sidii ay aayahheeda uga talin lahayd? Waa howl loo baahan yahay in la caddeeyo, sida uu qabo caalinka Bo Rothstein, isla-markaana aamin-san in loo baahan yahay hab cusub ee dhanka awoodda.
- Muddo ayaa iminka ka soo wareegtay kolkii baaritaan noocaasi ah la sameeyey - qiyaastii 25 sannadood hortood. Iyada oo wixii wakhtigaa ka dambeeyey ey bulshada ka dhaceen is-bedello waaweyn iyo dhanka awood qaybsiga oo eynaan xilligaa muujin karin, sida uu sheegay Bo Rothstein.
Baaritaankii ugu dambeeyay ee awood qaybsiga sannadkii 1990 oo uu dalabkeeda lahaa ra'iisal wasaare ku xigeenkii xilligaa Ingvar Carlsson, goolkiisuna ahaa sidii wax looga ogaan lahaa cidda ay awoodda dalku gacanta ugu jirto iyo in qaybaha bulshada qaarkood ey ka awood badan yihiin kooxaha kale.
Baaritaanka ayaa eegis ku sameeyay awoodaha qaybaha bulshada ee kala duwan, haddey noqon lahayd dhanka sinjiga, dabaqadaha iyo gobollada dalku ka kooban yahay ey saameeyn ugu yeelan karaan howlaha la xiriira canshuurta iyo sida loo isticmaalo, habka go'aannada siyaaseed loo gaaro ama iskuullada ey dhallaankoodu dhigtaan.
Hase yeeshee wixii intaa ka dambeeyay ayuu dalka Iswiidhen ku dhacay is-bedel aad u ballaaran laga soo bilaabo sannadihii 1990, sidaa daraadeed loo baahan yahay baaritaan hor leh oo amuurtaa lagu sameeyo iyo sawirka awood-qeeybsiga dalka, sida uu sheegay caalinka Bo Rothstein:
- Waxaa jira cilmi-baarisyo googoos ah, hase yeeshee waxay caqabaddu tahay in aanay jirin cid baaritaan ku sameeysay sawirka guud ahaaneed iyo dhammaan is-bedellada bulshada ku dhacey saameeynta ey middaa ku yeesheen. Is-bedello badan ayaa dhacay oo aasaaskii wax ka badalay, wax ka badalay nidaamkii awood-qeybsiga ee dalka loona baahan yahay in la bayaaniyo, sida uu sheegay Bo Rothstein.
Bilowgii sannadihii 1990 waxaa dalka ka jiray shaqa-la'aan gaarsii-san 2%, kolka loo barbar-dhigo midda iminka oo cagacageeynaysa 8%, waxaa kor u kacay farqiga dabaqadaha u dhexeeya, sidoo kale dalkani xubin kama ahayn ururka Midowga Yurub ee EU.
Wuxuu sidoo kale is-bedel ku dhacay 25-kii sannadood ee ugu dambeeyey nidaamkii siyaasadeed ee dalka, sida uu sheegay Bo Rothstein. Xisbiyada dalka ka jira waxey lumiyeen taageereyaal badan, siyaasiyiinta ayaan sidoo kale awood ku laheyn maamulka bangiga qaranka, ama xisaab-xirka aya hoggaanka sare ee ururka EU iyo sidoo kale in go’aannada maxkamadda EU-du gaarto ka awood badan yihiin kuwa ey gaaraan siyaasiyiinta iswiidhishku.
Intaa waxaa dheer in dalkani lahaa nooc ka mid ah noocyada soo-galootiga u suurtageliya siduu dalka deggenaansho uga heli lahaa. Dhammaan waxyaalahaasi waxey saameeyn ballaaran ku yeesheen cidda awooddu gacanta ugu jirto maanta, sida uu sheegay Bo Rothstein:
- Waxaan maanta ku dhaqannahey bulsho ka duwan, marka laga hadleyo tirada ajaaniibta dalka ku dhaqan, waddammada ey ka soo jeedaan, kolka loo barbar-dhigo sidii ey horay u ahayd, waana mid wax ka badashay awood-qeybsigii. Hase yeeshee aanay jirin culuun laga hayo iyo saameeynteeda intaba, sida uu sheegay Bo Rothstein.
Baaritaankii hore ayaa laga soo saarey dhowr buug oo dhaliyey doodo la xiriira nidaamka sinnaanta iyo awoodda bulshadu ku leedahay siyaasadda. Dhanka kale waa baaritaan uu ku baxay dhaqaale badan, qaatayna shan sannadood, hase yeeshee uu Bo Rothstein qabo in cilmi-baarista noocani oo kale loo baahan baahan yahay wakhti in la geliyo, sidii natiijo looga gaari lahaa:
- Waxaa la sameeyey baaritaanno yaryar oo aan gunta ugu dhaadhicin arrimmahaa. Mashruuca noocani oo kale ah waa inuu qaato ugu yaraan 4 illaa 5 sannadood si guul looga gaaro, haddii kale waxay un noqon in la soo bandhigo isu geeyn natiijooyinkii cilmi-baarisyada googooska ah ee la sameeyey, hase yeeshee aan wax la soo kordhiyaa jirin, waa sida uu qabo Bo Rothstein.